I-OPPO Reno: imizekelo yokufota kwimowudi yasebusuku | I-Androidsis
Kancinci kancinci siya sazi Iinkcukacha ezithe kratya malunga no-Oppo Reno, Iflegi elandelayo yomenzi waseAsia. Sazi ngakumbi nangakumbi malunga nesi sixhobo, njenge ukusebenza kwekhamera yakho. Nangona kuya kufuneka silinde de kube li-10 ku-Epreli ukuze sizazi zonke iinkcukacha, zimbalwa kwaye zimbalwa iimfihlo zokufihla. Okokugqibela? Imizekelo yeefoto ezibonisa amandla emodi yasebusuku ye Ikhamera ye-OPPO Reno.
Sithetha ngesixhobo esiza kuba necandelo lokufota elinamandla kwaye eliya kukwazi ukuma kwizithwalandwe ezinzima, ezinje ngeHuawei P30 Pro esandula ukwenziwa.Kodwa, emva kokubona imizekelo yeefoto ezithathwe ebusuku kunye nomsebenzi olandelayo umenzi waseAsia, kufuneka sivume ukuba, ukutsho nje okuncinci, umsebenzi owenziweyo malunga noku uyamangalisa ngokwenene.
Le mizekelo yokufota isibonisa ukuba ikhamera ye-OPPO Reno iya kuba sisilo
ephepheni, sinesistim sekhamera ephindwe kabini eya kuthi ivelele ukuba nayo inzwa yokuqala ye-megapixel engama-48 Ityikitywe nguSony kwaye ikumgangatho onamandla ngokwenene. Kule nto kuya kufuneka songeze i-5 megapixel sensor yesibini eya kuba noxanduva lokufikelela kwi-10X zoom zoom. Ewe, inani elinomdla ngokwenene kwisixhobo solu hlobo. Kwaye ujonge eminye imizekelo yokufota, kuyacaca ukuba umsebenzi owenziweyo ubumangalisa nje.
Ewe besele sizibonile ezinye iinkcukacha ze-OPPO's 10X hybrid optical zoom technology, kodwa akukho mntu wayelindele umgangatho ophakamileyo kwiifoto. Lumka, le mifanekiso ivuziwe kwinethiwekhi yeWeibo, ngenxa yoko asinakuqinisekisa ukuba iyinyani, nangona yonke into ibonisa ukuba kunjalo kwaye oko i-OPPO Reno iya kuba necandelo eliphambili lokufota. Ngokukodwa kwimodi yasebusuku.
Kwaye yile, eyona ixhaphakileyo xa uthatha iifoto ngefowuni ephathekayo, yile iimeko ezikhanyisiweyo, okanye ngakumbi xa kusihlwa, izinto ezithathiweyo zizaliswa yingxolo, ukufikelela kwiziphumo ezibi kakhulu kwaye kude kakhulu noko kufezekiswa yikhamera eyiyo. Kodwa izinto ziyatshintsha, kwaye kube ngcono, kwicandelo leefoni.
Makhe sijonge, umzekelo, kwifoto ekhokela le migca. Sifumana umfanekiso onika umahluko omkhulu, inqanaba elikhulu leenkcukacha kunye nemibala eqaqambileyo nebukhali. Kodwa ngaphandle komgangatho womfanekiso obanjiweyo ngekhamera ye IINKCUKACHA Reno, Inqaku elisothuse kakhulu ngamafu. Ngaba unokucinga ukuba kunzima kangakanani ukubamba le nto ebusuku? Ewe, into yokuba ivele kule foto yimpumelelo kwicala lomenzi.
Ngoku, siza kukubonisa olunye uhlobo lokubanjwa ekunzima ukufezekisa ngeziphumo ezilungileyo kwiselfowuni: ifoto eshukumayo ngexesha lobusuku. Ayibobusuku, kuya kusiba mnyama ukuba kuchane. Nali iqhinga: ifoto ithathiwe ngexesha lokuvezwa okungenani kwemizuzwana engama-30, ukuze inzwa ibambe ukukhanya okuninzi kangangoko. Kodwa, ngaphandle kwale nyani, okanye ukuba akunakwenzeka ukufezekisa ezi ziphumo ngaphandle kokusebenzisa i-tripod, imifanekiso eyenziwe yikhamera ye-Oppo Reno iyamangalisa.
Okokugqibela, masikhumbule ukuba i-Oppo Reno iya kuba nescreen esenziwe ngepaneli ye-AMOLED ye-6.4-intshi eya kuthi ifikelele kwisisombululo esipheleleyo se-HD +. Kule nto kufuneka songeze iprosesa Snapdragon 710 Kunye noqwalaselo lwe-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina yangaphakathi, nangona kuya kubakho imodeli enevithamini ngakumbi nge-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yememori yangaphakathi.
Kwaye asinakulibala ibhetri yayo ye-3.680 mAh, kunye nenkqubo ye-VOOC 3.0 yokutshaja ngokukhawuleza eya kuthi ihlawulise isixhobo ngokukhawuleza kunangaphambili. Ngokucacileyo, ifayile ye- Reno Izakufika kunye nohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza kaGoogle, ke i-Android 9 Pie iya kuba negunya lokunika ubomi kwesi sixhobo esiya kuthi, njengoko besesibonisile ngaphambili, siza kuboniswa ngo-Epreli 10 kwaye sinethemba lokuba iya kuba nexabiso ijikeleze i-euro ezingama-500.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Imizekelo yeefoto ezivela kwikhamera ye-OPPO Reno zibonisa amandla amangalisayo kwimowudi yasebusuku
I-OPPO yondliwe kukuvuza: ngaphezulu kwama-50.000 euros entle kubasebenzi abadlulisa ulwazi